Banyere Anyị - Guangzhou Focuslaser Co., Ltd
3D eriri laser marking igwe
2D Fiber laser marking igwe
Iberibe Laser akara Machine
Klas m lasermarking igwe
Germany IPG Laser Ịcha Machine
CO2 efe Laser akara Machine
Gavlo CO2 Laser Cutting * osise Machine
3D UV laser osise igwe
Laser akụkụ ahụ mapụtara
Exchange nke mmụta
Che L ASER is a China famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
Anyị na ngwaahịa na-agụnye atọ isi di iche iche nke na ngwaahịa ndị eriri laser marking igwe, CO2 laser marking igwe na UV laser marking igwe. Dabere na anyị laser technology anyị mepụtara n'ime 3D eriri laser osise igwe (Deep osise igwe), Dynamic UV laser osise igwe, Dynamic CO2 laser engaving igwe, na-efe efe laser marking igwe, eriri laser ọnwụ igwe, laser ịgbado ọkụ igwe na na.
Ihe karịrị 20 usoro. Ahaziri ngwaahịa na ọrụ na-enye ndị ahịa na a ịrịba uru. Ruru akwa àgwà nke anyị na a pụrụ ịdabere na arụmọrụ, ha na-ọtụtụ-eji ngwá electronic, ngwaike, nlereanya na-eme, uwe, akpụkpọ ụkwụ, mgbasa ozi, na-ebi akwụkwọ na nkwakọ, toy na-eme, nakwa dị ka ihe ọrụ.
Jighi Q uality m nspection For Machine
Iji hụ na àgwà na nkwụsi ike nke igwe, Che laser eji ihe ndị kasị elu mmepụta na ule na ngwá, tinyere lasers mita nke dị site USA, CNC egweri igwe, ịgụ isiokwu mirror, AC agbanwe voltaji ike emulator mụ, na-elekwasị anya usoro.
Na anyị na-eji a thermostat ọtụtụ ụlọ, 3D ji atụ ngwá, laser dynamometers, digital akwa, na elu na ngwá na-elele àgwà na arụmọrụ nke anyị ulo oru laser akụrụngwa ọ bụla mmepụta nzọụkwụ iji hụ anyị igwe si àgwà na mụ arụmọrụ.
FOCUSLASER enye oké ọnụ, elu-edu igwe. Na uru nke China, zuru uru na usoro nke àgwà na-eri, ị nweta nke isi mmiri si Germany na United States, Japan, Taiwan na assemblying na n'ichepụta na China. FOCUSLASER nwere ihe kasị mma ọkọnọ-yinye-usoro maka akụkụ na mmiri, na a siri ike ndekọ nke àgwà na ọhụrụ, iji gosi na anyị 10-afọ arụmọrụ nke igwe.
FOCUSLASER-eweta ọnụ ọkachamara talent na technology, nwere a ukwuu ruru eru pesonel. Si software mmepe na ngwaike imewe, usoro ule, oru ọrụ na-agwụ agwụ site ọkachamara na oru pesonel.
R & D Ikike
FOCUSLASER emewo wee 23 ngwaike na software nchọpụta Kemịkalụ na elu tech ubi. Anyị nwere onye gbasiri R & D okwu ukwuu ahụmahụ laser ubi na anyị "na-Hi-Tech Enterprises" na China.
Focus Laser si obodo ebe na-enye ọtụtụ nke ohere iji belata mmepụta-akwụ ụgwọ, si otú mbenata anyị ahịa. FOCUSLASER n'isi ụlọ ọrụ dị na Guangzhou makwaara dị ka Canton 120 km (75 mi) n'ebe ugwu-n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Hong Kong na 145 km (90 mi) n'ebe ugwu nke Macau, Guangzhou nwere a akụkọ ihe mere eme nke n'elu 2,200 afọ na bụ isi terminus nke Maritime silk Road na-aga n'ihu na-eje ozi dị ka a isi na ọdụ ụgbọ mmiri na njem ehiwe taa, nakwa dị ka otu n'ime China atọ kasị obodo. Ebe anyị na-nwere ihe kasị mma ngwaahịa kenha usoro nwere ike mfe ẹkenam kacha elu technology na mmepụta akụrụngwa, talent, na iji a dịgasị iche iche nke Maritime na ikuku iga, anyị na-enwe ike nye elu-edu laser akụrụngwa na oké ọnụ price.
Quality ngwaahịa arụmọrụ ma aha ọma, FOCUSLASER ngwaahịa na-abụghị nanị ọma na-ere na China, ma na-e exported na ná mba 90 na mpaghara na ụwa, gụnyere: Germany, USA, Italy, Russia, Japan, South Korea, Turkey, Brazil, India, na United Arab Emirates, Saudi Arabia na mba ndị ọzọ, ngwaahịa bụ isiokwu a oké welcome na otuto. Anyị na-ekele ahịa 'ntụkwasị obi ma na-akwado nke FOCUSLASER.
Na-enye ihe kasị mma igwe na nke kacha mma price, ma na-enye afọ ojuju mgbe-sales ozi ahịa.
N'ihi na ihe ọmụma zuru ezu na anyị laser igwe, biko egbula kpọtụrụ anyị